Author Topic: Jharana Thapa - photos and profile (Read 107008 times)
« Reply #20 on: January 28, 2010, 11:08:21 AM »
'मैले निर्माण गर्ने सबै फिल्म हिट हुन्छन्'
२०६६ माघ १४
निर्माताभन्दा नायिका बन्न सजिलो लाग्छ झरना थापालाई । पहिलोपटक धर्मसंकट फिल्म निर्माण गरेर नायिकाका साथै निर्मात्रीकी रूपमा समेत स्थापित भएकी झरनाले अहिलेसम्म चारवटा फिल्म निर्माण गरिसकेकी छिन् । पति सुनीलकुमार थापा र झरनाले धर्मसंकटपछि गोर्खाली, ए मेरो हजुर र तक्दिर नामका फिल्म निर्माण गरिसकेका छन् । अभिनयका साथै फिल्म निर्माणमा समेत निरन्तर लागिरहेकी झरना अब अर्काे फिल्म निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको बताउँछिन् । नयाँ वर्षको अवसर पारेर सुटिङ थालिने उनको फिल्मको नाम रहेको छ- केटी हराएको सूचना ।
आफूले निर्माण गरेका चारवटै फिल्मले व्यावसायिक सफलता हासिल गरेको बताउँछिन् उनी । भन्छिन्, 'चारवटै फिल्म हिट भए । अब बन्ने फिल्म पनि हिट हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।' झरनाले निर्माण गरेको धर्मसंकटमा पहिलोपटक नायकद्वय शिव श्रेष्ठ र राजेश हमालले एकसाथ अभिनय गरेका थिए । स्टारहरूको भीड रहेको सो फिल्ममा शिव र राजेशका साथै गौरी मल्ल, विपना थापा, रमेश उप्रेती, मुरलीधर अनि झरना स्वयं अभिनीत छन् । 'स्टारयुक्त फिल्म भएकाले लगानी बढ्यो,' धर्मसंकट बनाउन पचास लाख रुपैयाँ लागेको बताउँदै झरनाले भनिन्, 'नयाँ निर्मात्री भएकाले कुनै कुराको आइडिया थिएन । त्यस कारण पनि लगानी बढ्यो ।' आफ्ना चार फिल्ममध्ये यही फिल्मबाट कम रुपैयाँ मुनाफा भएको बताउँछिन् झरना । 'तर, फिल्मका सबै पक्ष बबाल थिए,' झरनाले भनिन्, 'प्रदर्शनको बारेमा पनि राम्रो आइडिया नहुनाले सोचेजति नाफा हुन सकेन ।'
आफ्ना फिल्ममध्ये ए मेरो हजुरमा निभाएको अन्धीको भूमिका उनी आफैँलाई बुलन्द लागेको रहेछ । भनिन्, 'पहिलोपटक अन्धी केटीको भूमिका निभाएँ । निकै चुनौतीपूर्ण रोल थियो । पछि फिल्म हेर्दा लाग्यो, मैले राम्रो काम गरेछु ।' शिव रेग्मीको निर्देशनमा बनेको सो फिल्ममा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र झरना स्वयं प्रमुख भूमिकामा छन् । नारीले आफ्नो तक्दिर आफैँले लेख्नुपर्छ भन्ने थिममा झरनाले निर्माण गरेको तक्दिर फिल्मले व्यावसायिक सफलता मात्र पाएन । वर्षकै उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड पायो । विराज भट्ट, दिलीप रायमाझी र झरना स्वयं प्रमुख भूमिकामा अभिनीत सो फिल्म दीपक श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको हो ।
तक्दिरलाई मनोरञ्जनका साथै नारी सशक्तीकरणयुक्त फिल्म भएको बताउँछिन् उनी । 'मैले बनाउने फिल्म मनोरञ्जनात्मकका साथै केही न केही सन्देशयुक्त होस् भन्ने चाहन्छु,' झरना भन्छिन्, 'केटी हराएको सूचनामा पनि मनोरञ्जनका साथै समाजका लागि केही सन्देश दिने कोसिसमा छौँ ।' आफूले निर्माण गर्ने फिल्ममा आफैँ नायिका खेल्नु कथाको माग भएको बताउँछिन् झरना । 'स्त्रिmप्टमा फिट भएमात्र आफैँ खेल्छु,' स्पष्टीकरण दिँदै उनले भनिन्, 'जबर्जस्ती हिरोइन बन्ने भए त धर्मसंकटमै बन्थेँ नि ।'
झरनाले निर्माण गरेका फिल्मका गीत पनि हिट छन् । धर्मसंकटमा मलाई नेपाली माया चाहिन्छ त्यतिवेला निकै चर्चित भएको थियो । गोर्खाली फिल्मको काठमाडौंको बीचैमा घन्टाघर बोलको गीतले पनि बजार तताएको थियो । पछि ए मेरो हजुरको शीर्ष गीत त झन् चर्चित भएको थियो भने तक्दिरको मै मोरीलाई लिन परदेशी आउँछ रे अहिले पनि चर्चामा छ । आफूले बनाएको फिल्मको गीत जनजिब्रोमा झुन्डिने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउँदै झरनाले भनिन्, 'हामी धेरै मिहिनेत गर्छाँ । जसकारण अहिलेसम्म परिणाम पनि राम्रो आइरहेको छ ।' तिहारपछि सुटिङ हुने बताएको केटी हराएको सूचना फिल्मको सुटिङ सुरु हुन नसक्नुको कारण खोल्दै उनले भनिन्, 'स्त्रिmप्ट तथा गीत नै राम्रो बनाउने कोसिसमा छौँ । त्यसैले समय लागेको हो ।'
« Reply #21 on: March 15, 2010, 11:41:55 AM »
१३ वर्षको वैवाहिक जीवनमा मैले सुनीलजीलाई कहिल्यै पनि यो भएन त्यो भएन भनेर सताएकी छैन । मेरो माइतीको अनुमतिविना उहाँसँग भागेर बिहे गरे पनि त्यसपछि भने कसैलाई गुनासो गर्ने ठाउँ दिएकी छैन । सुनीलजीले पनि मलाई जे चाहिन्छ, सधै पुर्‍याइदिनुभएको छ ।
० झरना थापा
अचेल म धेरैजसो सुटिङमै ब्यस्त हुन्छु　। एकमाथि अर्का सुटिङ पर्ने भएकाले घरपरिवारलाई समय दिन गाह्रो भइरहेको छ　। सुटिङ नपर्दा भने फुर्सद हुन्छ　। फुर्सदका हरेक पल म मेरो परिवारसँग बिताउन चाहन्छु　।
सुटिङ नभएको दिन म बिहान अबेर नौ-दस बजेतिर उठ्छु　। जतिसुकै हतारमा भए पनि बिहान सधैँ बत्ती बालेर भगवान्लाई फूल चढाउने मेरो बानी छ　। आज म जे छु, मेरो परिवार जे छ, सबै भगवान्को कृपा हो　। कहिलेकाहीँ सपरिवार भगवान्को दर्शन गर्न मन्दिर जान्छौँ हामी　।
म किचनमा बिरलै पस्छु　। बेफुसर्दीका कारण खाना पकाउन पनि भ्याउँदिनँ　। सहयोगी बहिनीले खाना बनाउने गर्छिन्　। मेरी सासुआमा पनि किचनमा सघाउनुहुन्छ　। उहाँ मीठो पकाउनुहुन्छ　। मलाई पनि खाना बनाउन मन लाग्छ　। स्वाद-स्वादका परिकार बनाउन सक्छु　। टाइम भए र मुड चले पकाउने गरेकी छु　।
म खसीको मासु निकै मिठो पकाउँछु रे- सुनीलजी (पति सुनीलकुमार थापा) ले भन्नुभएको　। उहाँलाई मैले पकाएको खसीको मासु र भातका साथमा गोलभेडाको अचार निकै मनपर्छ　। कहिलेकाहीँ नुन चर्का भयो भने पनि मीठो मानिमानी खानुहुन्छ　। आफूले खाँदा बल्ल थाहा हुन्छ- नुन चर्का भएछ　। मलाई भने साधारण खाना मनपर्छ　। दाल, भात, गुन्द्रुक, माछा अनि दही　। करेला पनि निकै मीठो लाग्छ मलाई　। तर, ब्लडप्रेसर लो भएकाले धेरै खान पाउँदिनँ　। भान्टा र परबर भने मलाई मन पर्दैन　। मेरी छोरी सुहाना भने घरायसी खानेकुराभन्दा आइसक्रिम, चक्लेट बढी मन पराउँछिन्　। खाना पनि फकाइफकाई खुवाउनुपर्छ　।
म निट एन्ड क्लिन मन पराउँछु　। फुर्सदका दिनमा म घरको सरसफाइ गर्ने गर्छु　। फोहोर पटक्कै मन पर्दैन　। उहाँ सामान लथालिंग पार्नुहुन्छ　। मलाई सम्हाल्दैको हैरान ! सानैदेखि होस्टेल बसेकाले होला उहाँ कुनै सामान पनि जतनका साथ राख्नुहुन्न, जहाँबाट झिकेको हो त्यहीँ राख्न जान्नुहुन्न　। उहाँको यस बानीका कारण हामी दुईजनामा कहिलेकाहीँ ठाकठुक पर्छ　।
नायिकाका साथै म जिम्मेवार बुहारी, पत्नी अनि आमा हु　। पेसा र पारिवारिक कर्तव्य र जिम्मेवारीबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ भन्नेे हेक्का छ मलाई　।
सुटिङ नभएको समय मैले मेरो घरपरिवारका लागि समर्पण गरेकी छु　। अस्ति मात्रै मैले एक महिनालाई पुग्ने दाल, चामल, नुन, तेल, पीठो, सुकेको खुर्सानी र मसलाहरू गरेर झन्डै दस हजारको सपिङ गरेँ　। घरको लागि भ्याएसम्म म आफैँ सपिङ गर्छु　। छोरी होस्टल बस्ने भएकीले फुर्सद हुदा उसलाई भेट्न जान्छौँ　। सुनीलजी, म र छोरी लङटुरमा पनि जाने गरेका छौँ　।
श्रीमान्लाई सताएको दिन छैन
अहिलेसम्मको वैवाहिक जिन्दगी (१३ वर्ष) मा मैले सुनीलजीलाई कहिल्यै पनि यो भएन, त्यो भएन भनेर सताएकी छैन　।
मेरो माइतीको अनुमतिबिना उहाँसँग भागेर बिहे गरे पनि मैले कसैलाई गुनासो गर्ने ठाउँ दिएकी छैन　। मलाई जे चाहिन्छ, उहाँले सधैँ पुर्‍याउनुभएको छ　। मैले मागेरै लिनुपर्ने कुनै कुरा छैन　। म भगवान् निकै मान्ने भएकीले कहिलेकाहीँ तीर्थव्रत गर्ने कुरामा उहाँको समय नमिल्ने हुनाले अधूरो रहने गर्दछ　। केही समयदेखि सुनीलजीलाई भारतको वैष्णोदेवी माताको दर्शन गर्न जाऊँ भन्दै आएकी छु　। उहाँ व्यापारी मान्छे　। मेरो फुर्सद भएको बेलामा उहाँको फुर्सद नहुने, अनि उहाँ फुर्सदमा हुदा म सुटिङमा व्यस्त हुने भएकाले अहिलेसम्म वैष्णोदेवी मन्दिर दर्शन गर्न जान पाइएको छैन　।
म सुनीलजीबिनाको जीवन कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ　। तर ममा यति धेरै हिम्मत छ कि परिआए एक्लो जिन्दगी पनि बाँच्न सक्छु भन्ने लाग्छ । सबै समय र भाग्यको खेल हो　। भोलि कसले देख्या छ र ? एक्लै जिन्दगी बिताउनुपर्‍यो भने पनि म पछि हट्दिनँ　।
उहाँ मलाई निकै माया गर्नुहुन्छ　। उहाँको माया देख्दा सबै लोग्नेमान्छे आफ्ना श्रीमतीलाई यति धेरै माया गर्छन् त ? भन्ने शंका लाग्छ　। उहाँ जिम्मेवार पति र बुबा हो　। जिम्मेवारी बहन गर्न उहाँ कहिल्यै पनि चुक्नुभएको छैन　। उहाँको यो बानी मलाई निकै राम्रो लाग्छ　।
सुटिङले गर्दा म प्रायः घरबाहिरै हुन्छ　। घरप्रतिको मेरो जिम्मेवारी पनि उहाँले बहन गर्नुहुन्छ　। सुटिङ परेको दिन बिहान सबेरै उठेर मेरा लागि ब्रेकफास्ट तयार गर्नुहुन्छ　। छोरीको हेरचाह पनि उहाँले नै धेरै गर्नुहुन्छ　। छोरी पनि बाबु भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन्　। म घरमा धेरै बस्न नपाउने भएकाले होला छोरी पनि मसँगभन्दा बाबुसँग धेरै रमाइलो मान्छिन्　। सुटिङमा बाहिर हुदा म मेरो घरपरिवारलाई धेरै मिस गर्छु　।
परिवार सम्झिएर रातभरि रोएँ
एकपटक भने म रातभरि रोएकी छु　। एक कार्यक्रममा म दुई महिनाका लागि लण्डन गएकी थिएँ　। अरू बेलामा घरबाहिर बस्दा म कहिल्यै रोएकी थिइनँ　। म लण्डनमा भएको बेलामा यता मेरो ससुरा बा स्वर्गबास हुनुभयो　। मैले उहाँको मुख हेर्न पाइनँ　। पूणिर्माको दिन थियो　। होटलको छतमा गएर आकाशतिर हेरेको त अनायासै मेरा आँखा भरिए　। त्यतिबेला म स्वर्गबासी ससुरा, सासु, छोरी अनि श्रीमान् सम्झिएर निकै रोएँ　। मलाई होमसिक भएको थियो सायद　। कहिल्यै नरुने मान्छे म, रातभरि रोइरहेँ　। घरपरिवार भनेको के हो, मैले त्यतिबेला बुझेँ　।
त्यसो गर्दा रिस उठ्छ
कहिलेकाहीँ मान्छेका मुखबाट नानाथरि सुन्नुपर्दा मलाई निकै रिस उठ्छ　। इष्र्या गर्नेहरूले आफँै कुरा बनाएर भन्छन्　। तर, मलाई थाहा छ- नखाएको विष लाग्दैन　।
सुनीलजी कहिलेकाहीँ कुरै नबुझी बोल्नुहुन्छ, अनि मलाई रिस उठ्छ　। मलाई रिस उठ्यो भने म ठूल्ठूलो स्वरमा कराउँछु　। पछि, उहाँ आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुहुन्छ, अनि कुरा साम्य हुन्छ　।
मलाई धेरै रिस उठ्यो, टेन्सन भयो भने झ्याप्पै निद्रा लाग्छ　। निद्राले निस्लोट बनाएपछि म सुतिहाल्छु　। निद्राबाट बिउँझदा सबै रिस, टेन्सन गायब भइसकेको हुन्छ　। अचेल डेढदुई महिना भयो, ठूलो स्वरले बोल्नुपरेको छैन　।
« Reply #22 on: March 15, 2010, 11:42:07 AM »
पतिका मनपर्ने-नपर्ने बानी
मलाई सुनीलजीका सबै बानी मन पर्छन्, कुरा नबुझी आवेगमा आइहाल्नेबाहेक　। उहाँ मिलनसार, सहयोगी, सहृदयी हुनुहुन्छ- आफ्नो र परिवारको ख्याल राख्ने　।
उहाँलाई खुसी हुन कुनै नौलो या ठूलो कुरा चाहिँदैन　। सधैँ त्यत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ　। जे छ, त्यसैमा सन्तोष मान्नुहुन्छ　। मलाई हरेक कुरामा गाइड गर्नुहुन्छ　।
उहाँ खासै मात्तिने गरी पिउनुहुन्न　। तर, कहिलेकाहीँ भने उहाँ मात्नुहुन्छ　। मातेपछि उहाँलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो हुन्छ　। बोलेको बोल्यै गर्नुहुन्छ　। कसैगरी पनि चुप लगाउन सकिन्नँ　।
अरू रक्सी पिउँदा त उहाँलाई केही हँुदैन तर भोड्का र खुकुरी रम पिउनुभयो भने उहाँलाई नराम्रोसँग लाग्छ　। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ- 'भोड्का र खुकुरी रम पिएपछि मलाई के हुन्छ, होसै हुँदैन　।' त्यसैले, उहाँलाई भोड्का र खुकुरी रम नपिउन आग्रह गर्ने गरेकी छु　। उहाँ पनि हम्मेसी ती रक्सी पिउनुहुन्न　।
उहाँले अचेल आफूलाई सुधार्नुभएको छ　। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- उहाँ कहिलेकाहीँ बहकिनुहुन्छ　। को-को, को-को आइमाईसँगको सम्बन्धका कारण उहाँ अराजक बन्नुभएको छ　।
केही अघिको घटना हो　। मध्यरातमा मैले उहाँ र एउटी हिरोइनलाई आफ्नै घरअगाडि प्रेमरत देखेँ　। मलाई साह्रै पीडा भयो　। आखिर ममा के कमी छ र अरू आइमाईको संगत गर्नुपर्‍यो उहाँले ? पहिला पनि मैले उहाँलाई त्यही हिरोइनसँग रंगेहात भेटेकीले निकै पीडा भएको थियो　।
मध्यरातको त्यस घटनाले उहाँप्रतिको विश्वास हराएको थियो　। म केही रात निकै रोएँ　। एक मन त सोचेँ- 'अब म सुनीलसँग बस्दिनँ　।' माइतमा बुबामम्मीलाई आफ्नो निर्णय सुनाएँ　। एकचोटीको मात्र गल्ती भएको भए पो माफ गर्न सकिन्थ्यो　। पटकपटक एउटै गल्ती दोहोर्‍याएपछि त सहनै गाह्रो हुदो रै'छ　। मलाई लाग्यो मेरो स्वर्गजस्तो घरमा नजर लाग्यो　।
पछि, 'उहाँले मसँग अब आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिनँ,　अन्तिमपटक माफ गरिदेऊ,' भनेर वाचा गर्नुभयो, अनि म फर्किएँ । मलाई लाग्छ, उहाँले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुभएको छ　। अहिले भन्ने गर्नुहुन्छ- 'म गलत बाटोमा थिएँ　।'
पतिसँग तीन स्मरणीय पल
० कलिलै उमेरमा भागेर प्रेमविवाह गरेका हामीलाई जिन्दगी के हो भन्ने केही थाहा थिएन　। उहाँको प्रेममा म एकोहोरिएकी थिएँ　। बिहे भएको केही दिनपछि घरमा एउटा पार्टी थियो　। उहाँकै आग्रहमा मैले जिन्दगीमा पहिलोपटक वाइन पिएँ　। पिउँदै गएपछि म मात्दै गएछु　। सबैजना पिउँदै, डान्स गर्दै रमाइरहेका थिए　। पार्टी सिद्धिएपछि हामी बेडरुममा गयौँ　। धेरै मातेकाले होला, बेडमा पल्टन नपाउँदै मैले उल्टी गर्न थालेँ　। उहाँ आत्तिँदै गिलास ल्याएर उल्टी थाप्न थाल्नुभयो　। एकैचोटीमा गिलास भरियो　। अनि फेरि उहाँले हतारहतार सिरानीको खोल थाप्नुभयो　। त्यो घटना म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ　। मप्रति उहाँको प्रेम कति छ भन्ने पनि त्यो घटनाले दर्शाउँछ　।
० म पिकेमा पढिरहेकी थिएँ　। हाम्रो बिहे भइसकेको थियो　। कलेजमा भएको डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिएकी थिएँ　। म फस्ट भएँ　। मैले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको हातबाट अवार्ड पाएँ　। राजारानीको हातबाट अवार्ड पाएको उपलक्ष्यमा सुनीलजीले एउटा भव्य पार्टी दिनुभयो　। त्यो पनि मेरा लागि स्मरणीय छ　। आफ्नी पत्नीको सफलतामा रमाउने पतिका रूपमा बुझेकी छु, मैले उहाँलाई　।
० छोरी जन्मँदाको कुरा हो　। सुत्केरी ब्यथा लागेर मलाई हिमाल हस्पिटलमा राखिएको थियो　। म प्रसव वेदनाले कराउँथेँ, छटपटाउथेँ　। उहाँ मेरो पीडा देखेर आँखाभरि आँसु पार्नुहुन्थ्यो　।
मेरो पीडामा उहाँ रोएको देख्दा मलाई उहाँको निकै माया लाग्यो　। भन्छन्, लोग्नेमान्छे रुँदैनन्　। तर, मेरो श्रीमान्को मन कमलो छ　। छोरी जन्मिएको केही घन्टापछि मात्र उहाँलाई मसँग भेट्न दिइयो　। त्यतिबेला पनि उहाँ मलाई सुम्सुम्याउँदै रुनुभयो　।
म सुत्केरी भएपछि मेरो र बच्चाको हरपल ख्याल गर्नुभयो उहाँले　। ती दिन सम्झँदा सुनीलजीले हजार गल्ती गरे पनि माफ गरिदिन मन लाग्छ　।
« Reply #23 on: March 15, 2010, 11:43:21 AM »
« Reply #24 on: May 01, 2010, 12:18:56 AM »
Jharana Thapa ta Lucky are ni haina, jun movie khelyo, songs haru saab hit hun6...
« Reply #25 on: May 27, 2011, 08:41:35 AM »
« Reply #26 on: October 28, 2011, 01:01:34 PM »
Tihar 2068 (2011)
घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने चाहना सबैको हुन्छ । यो मेरो पनि चाहना हो । हामी दुई दिदीबहिनी छौं । दुई दिदीबहिनीले एकजना भाइलाई टीका लगाईदिन्छौ । भाइलाई टीका लगाएर उसको लामो दीर्घायूको कामना गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ । अब घर पुगेपछि घर सिंगार्ने काम छ । देउसी भैलो खेल्नका लागि सवैतिरबाट निमन्त्रणा आएको छ । यसैले पनि निमन्त्रणा मान्दै देउसी भैलो खेल्न जाने पनि ईच्छा छ । तास, जुवा म केही पनि खेल्दिन । धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो पर्व को महत्व धेरै छ जस्तो लाग्छ । धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ । भाइको दीर्घायुको कामना गर्दै टीका लगाईन्छ । घरमै रमाईलो गरिन्छ । छायांकनबाट छुट्टिपाईने भएकाले पनि आनन्द लाग्छ ।
« Reply #27 on: April 11, 2012, 01:41:00 PM »
« Reply #28 on: August 22, 2012, 08:55:25 AM »
« Reply #29 on: September 17, 2012, 01:54:40 AM »
feri school ma